အချစ်နယ်ကျွံ (အသက် ၁၈နူစ်အောက်များ လုံးဝ မဖတ်ရူကြရန်): မော်ဒယ်လ်မလေးရဲ့ ပို့စ်
ဒေဝီမဂ္ဂဇင်းတိုက်သို့ သွန်းဆက် ရောက်နေသည်မှာ၁၅မိနစ်ခန့်ရှိပြီ
ဖြစ်သည်။သူမအားရိုက်ကူးပေးမည့်ဓာတ်ပုံဆရာအားထိုင်စောင့်နေခြင်းဖြစ်သည်။သွန်းဆက်ဆိုသည်မှာလည်းအကယ်ဒမီဗန်းကိုင်မော်ဒယ်လ် ၁ဦးဖြစ်ပြီး မော်ဒယ်လ်လောကတွင်အနည်းငယ်နာမည်ရလာသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ဂျာနယ်တွေ ကြော်ငြာတွေနဲ့ အင်တာစာမျက်နှာတော်တော်များများတွင်သူ့ပုံကနေရာယူထားသည်။အခုလည်းသူ့အားမဂ္ဂဇင်းတိုက်မှဒီလရဲ့ မျက်နှာဖုံးရှင်အဖြစ်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်ကမ်းလှမ်းထားသဖြင့်ဒီနေရာသို့ ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။သို့ သော်ဓာတ်ပုံဆရာကအောက်ဒိုးထွက်ရိုက်နေသဖြင့်ပြန်မရောက်သေးသောကြောင့်သူမထိုင်စောင့်နေရလေသည်။ခဏကြာတော့ဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်သူပြန်ရောက်လာပြီးသူမကိုလာရောက်မိတ်ဆက်လေသည်။"ဒီက ညီမက သွန်းဆက်နော် တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် အကိုက ညီမကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမယ့် ခေတ်သစ် လို့ ခေါ်ပါတယ်..။"…"အော် ဟုတ်ကဲ့ရှင့် ညီမက သွန်းဆက်ပါ ဝမ်းသာပါတယ်"..."ဒါဆိုအခန်းထဲသွားရအောင် အထဲမှာ Lighting တွေဘာတွေ ချိန်ပြီးပါပြီ"..။ပြောရင်းဆိုရင်းပဲ ခေတ်သစ်ကပင်ဦးဆောင်ကာ သွန်းဆက်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရမည့်အခန်းထဲခေါ်သွားလိုက်သည်။ထို့ နောက် "ညီမရေ..အင်္ကျီလည်ဟိုက်နဲ့ စကပ်တိုပါတယ်မလား အကိုက sexy pose လေးတွေရိုက်မှာဆိုတော့..".."ဟုတ်ကဲ့..ပါတယ်ရှင့်..အခုတခါတည်းလဲလိုက်တော့မယ်နော်"ဟုဆိုကာသွန်းဆက်တစ်ယောက်အဝတ်လဲခန်းအတွင်းသို့ ဝင်သွားလေသည်။ခဏကြာတော့ပြန်ထွက်လာကာဓာတ်ပုံစရိုက်တော့သည်။သွန်းဆက်လည်းကိုယ်နေဟန်ထားအမျိုးမျိုးဖြင့် သေချာ pose ပေးသလို ခေတ်သစ်ကလည်း လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုသေချာထိရောက်အောင်ရိုက်ကူးတော့သည်။အခန်းထဲမှာကလည်းသူတို့ ၂ယောက်မှလွဲ၍အခြားသူမရှိသဖြင့်အလုပ်လုပ်ရတာအေးအေးဆေးဆေးနှင့် အဆင်ပြေလှသည်။၁၀ပုံနီးပါးရိုက်ပြီးချိန်တွင်"ညီမ..ဟိုနောက်ကခုံလေးကိုခွထိုင်ပြီး ရင်ဘတ်ကိုအရှေ့နဲနဲကိုင်းချပေးပါလား"..သွန်းဆက်လည်း ဓာတ်ပုံဆရာခိုင်းသည့်အတိုင်း pose ကိုလုပ်ရာ အင်္ကျီမှာဟိုက်နေသဖြင့်နို့၂လုံးကရှေ့ကိုပြူထွက်လာသည်။ထို့ နောက်ခေတ်သစ်ခိုင်းသည့်အတိုင်းခုံပေါ်ကို ခြေထောက်တစ်ဖက်တင်ပြီး တင်နှင့်ရင်ကို ရှေ့ပစ်နောက်ပစ် ကော့ကာမျက်နှာကိုမော့လိုက်သည်။ထိုအချိန်တွင်လည်း ကျပ်ထုပ်လှသောစကပ်ကြောင့်သွန်းဆက်၏ဖင်တုံးကြီးများမှာစွင့်စွင့်ကားကားနှင့်ပေါ်လာတော့သည်။ခေတ်သစ်ကလည်းသွန်းဆက်၏ကိုယ်ပေါ်မှကောက်ကြောင်းများကိုတစ်ချက်မှအလွတ်မခံဘဲတဖျပ်ဖျပ်ရိုက်ယူတော့သည်။ပုံ၃၀ကျော်ရိုက်ပြီးချိန်တွင်"ရပြီညီမ ဒီလောက်ဆိုလုံလောက်ပြီ ဒီမှာပုံလေးတွေလာကြည့်ပါဦး"..သွန်းဆက်လည်းဓာတ်ပုံတွေပြန်ကြည့်ရန်ခေတ်သစ်အနားသို့ ရောက်လာကာ"အကို သွန်းရဲ့ pose တွေကောင်းရဲ့လားဟင် အဆင်မပြေတာရောရှိသေးလား"...ဟုမေးလိုက်သည်။ခေတ်သစ်ကလည်း"အာ..poseတွေကအရမ်းကောင်းပါတယ်..အကို ရိုက်လာဖူးတဲ့ မော်ဒယ်လ်တွေထဲမှာ ညီမ အလှဆုံးပဲ"..သွန်းဆက်ခမျာ ခေတ်သစ်၏စကားကြောင့်အနည်းငယ်ရှက်သွေးဖြာသွားကာ"အာ..အကိုကလည်း"ဟုပြောရင်းခေတ်သစ် ပခုံးကိုခပ်ဖွဖွလှမ်းရိုက်လိုက်သည်။"တကယ်ပါ..သွန်း ရယ်...သွန်းရဲ့ကောက်ကြောင်းတွေက အရမ်းလှလို့ အကို့ မှာရိုက်နေရင်း လီးတောင် တောင်လာတယ်"....။
"ရှင်......" ခေတ်သစ်၏ရုတ်တရက်ပြောလိုက်သောစကားကြောင့်သွန်းဆက်မျက်လုံးပြူးသွားကာ အံသြသွားသည်။ခေတ်သစ်ကလည်းပြောပြောဆိုဘောင်းဘီကိုဆွဲခ္ဈတ်ချလိုက်ပြီး "ဒီမှာကြည့်" ဟုပြလိုက်ရာ အတွင်းခံဘောင်းဘီဖောင်းကားနေသည်ကိုမြင်ပြီး ရှက်ကာ သွန်းဆက်မျက်နှာလွှဲလိုက်သည်။"အို..အကိုရယ် ဒါဘာလုပ်တာတုန်း လူတွေမြင်ကုန်မယ်"...
"မရှက်ပါနဲ့ကွာ အခန်းထဲမှာကိုယ်တို့ ပဲရှိတာဘယ်သူမှမမြင်ဘူး..လာ..ကိုယ့်လီးကိုကိုင်ကြည့်"..ခေတ်သစ်မှာသွန်းဆက်၏လက်ကိုဆွဲယူကာသူ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုခ္ဈတ်ပြီးလီးပေါ်သို့ တင်ပေးလိုက်သည်။ပူနွေးမာတောင်နေတဲ့အရာကိုထိတွေ့လိုက်သဖြင့်သွန်းဆက်မျက်နှာရဲလာကာရင်တွေပါခုန်လာတော့သည်။"ကိုခေတ်သစ်ရယ်..မသင့်တော်ပါဘူးရှင်..မလုပ်ပါနဲ့နော်"..."သွန်းကလည်းကွာ ကိုယ် တကယ် သွန်းကိုချစ်ချင်လို့ ပါ"ဟုဆိုကာသွန်းဆက်ရဲ့ဖင်ကြားထဲကိုစကပ်ပေါ်မှလက်ဖြင့်အုပ်ကာကိုင်လိုက်ပြီး ကျန်လက်၁ဖက်ကလည်းအင်္ကျီရင်ဘတ်ကိုဆွဲဖြဲကာပြူထွက်လာသည့်နို့၂လုံးကိုအငမ်းမရဆွဲစုပ်လိုက်သည်။သွန်းဆက်လည်းတစ်ကိုယ်လုံးလူးလွန့်ကာ ရုန်းထွက်ဖို့ အင်အားမရှိတော့သဖြင့်"ဟုတ်ပါပြီရှင်..ဒါဆိုလည်းက္ဈန်မကိုအရမ်းတော့မလုပ်ပါနဲ့"ဟုအသံကတုန်ကယင်နဲ့ပြောရှာသည်။ခေတ်သစ်ကလည်း"ဒါဆို ကိုယ်တို့ အဝတ်လဲခန်းထဲသွားရအောင် သွန်းကို ကိုယ် အရမ်းကောင်းအောင်လိုးပေးပါ့မယ်"ဟုဆိုကာအဝတ်လဲခန်းအတွင်းခေါ်ချသွားတော့သည်။အထဲကိုရောက်မှသွန်းဆက်၏စကပ်အောက်သို့ လက်ထည့်ကာအောက်ခံဘောင်းဘီကိုဆွဲခ္ဈတ်ချလိုက်သည်။အပေါ်ပိုင်းမှာလည်းဗလာကျင်းသွားပြီးဖြူဖွေးနေသောနို့လေး၂လုံးမှာအရှင်းသားဖြစ်သွားလေသည်။ထို့ နောက်စကပ်ကိုပါခ္ဈတ်ချကာသွန်းဆက်၏ပေါင်၂လုံးကိုလက်နှင့်မချီပြီးနံရံတွင်ကပ်ထားလိုက်သည်။သွန်းဆက်၏ပေါင်၂ခြမ်းမှာလည်းအနည်းငယ်ဖြဲထားပေးသလိုဖြစ်သွားကာပေါင်ကြားမှစောက်ဖုတ်ရဲရဲလေးထွက်လာတော့သည်။ခေတ်သစ်လည်းတံတွေးတစ်ချက်စွတ်ကာလီးကိုကိုင်ပြီးစောက်ဖုတ်ထဲသို့ သွင်းလိုက်တော့သည်။"အ..အား..သေပါပြီ နာတယ်"..သွန်းဆက်မှာပါကင်ဖြစ်သဖြင့်ပထမဆုံးအခေါက်တွင်အနဲငယ်ခံရခက်နေတော့သည်။"အကိုရယ်..သွန်းမခံနိုင်ဘူးထင်တယ်" .."သွန်းရယ်ခဏပါပဲတဖြည်းဖြည်းအသားကျသွားပါလိမ့်မယ်".."အား..အင်း..ဟင်း"..ခေတ်သစ်မှာမှန်မှန်လေးလိုးနေပေးရင်းကလီးကိုဆွဲထုတ်ကြည့်လိုက်ရာသွေးစလေးများအနဲငယ်ပေကျံနေတာတွေ့လိုက်ရသည်။သွန်းဆက်ကလည်း"ဟာ..သွေးတွေ..အကို ရပ်လိုက်ပါနော် သွန်း နာလို့ ပါ'..."သွန်းရယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး..သွန်းကပါကင်မို့လို့အမှေးပါးလေးပြဲသွားတာပါ"ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပင်ခေတ်သစ်လည်းဆက်တိုက်လိုးပေးနေလိုက်သည်။ "အား..အား..အင်း...က္ဈတ်..က္ဈတ်"...."သွန်း...ဘယ်လိုလဲ ကောင်းနေပြီမလား"..."အီး..ဟီး..အား..ဟုတ်..နဲနဲတော့ကောင်းသလိုပဲ"..."ဒါဆိုနံရံဘက်ကိုလက်ထောက်ပြီးကုန်းပေးနော်..ကိုယ်ဖင်လိုးချင်လို့"..သွန်းဆက်လည်းခေတ်သစ်ပြောသလိုဖင်ကုန်းပေးလိုက်ရာနီရဲနေသောစောက်ဖုတ်အက်ကွဲကြောင်းလေးကအနောက်ကိုပြူထွက်လာသည်။ခေတ်သစ်လည်းသွန်းဆက်ဖင်ကြီးကိုလက်၂ဖက်နှင့်ကိုင်ကာလီးထိုးထည့်ပြီးဆောင့်လိုးတော့သည်။"ဒုတ်..ဒုတ်..အူး..ရှီး..အီး..အ.အ..အားးးး..အား...အား..အကိုရယ် သွန်းအရမ်းကောင်းနေပြီ စိတ်ကြိုက်သာလိုးပါတော့...အား..အား..အား..အင်း..ဆောင့်..ရတယ်..နာနာသာဆောင့်လိုး...အင်း..ကောင်းလိုက်တာ..အားးး..ကောင်းတယ်..ကောင်းလိုက်တာ..အရမ်းကောင်းတာပဲ"… သွန်းဆက်မှာမျက်စိမှိတ်ကာလီးအရသာကိုအပီခံစားနေတော့သည်။"အား..အ..အားး..အကို လိုးတာသိပ်ကောင်းတာပဲ..အူး..ဟူး..အား..ဟား..အား..အား..က္ဈတ်..က္ဈတ်..အမေရေ...သမီးစောက်ဖုတ်ပြဲပါပြီ..အား..အင်း..ဟင်း..အကိုရေ..နာနာသာလိုး..သွန်းပြီးတော့မယ်..အား..လိုး..လိုး..အိုး..ဟိုး..အင်း..အားးးးးး...အ..အား...လိုးပါ...မြန်မြန်လေး...ကောင်းလိုက်တာ...ကိုရေ...သွန်း..ပြီးတော့မယ်...အင်း..ဟင်း..ပြီးပြီ..အူးဟူး......ရှီး"
နောက်ဆုံးတွင်သွန်းဆက်မှာစောက်ဖုတ်ထဲမှအရည်များရွှဲလာကာအထွတ်အထိပ်ရောက်ရင်းပြီးသွားလေသည်။ခေတ်သစ် လီးကိုဆွဲခ္ဈတ်လိုက်ချိန်တွင် စောက်ဖုတ်ထဲမှအရည်များစီးကျလာတော့သည်။"သွန်း..ကိုယ့်ကိုပြီးအောင်လုပ်ပေးဦးလေ"..ခေတ်သစ်စကားကြောင့် သွန်းဆက်လည်းသဘောပေါက်လိုက်ကာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးလီးကိုလက်နှင့်ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်သည်။ခေတ်သစ်လည်းအားမရသဖြင့်လီးကိုကိုင်ကာသွန်းဆက်ပါးစပ်ထဲထည့်ပေးလိုက်သည်။သွန်းဆက်လည်းပါးစပ်ထဲအပြည့်နေရာယူထားသည့်လီးကြီးကိုကြိုးစားကာစုပ်ပေးရှာသည်။"ပြွတ်စ်..ပြွတ်စ်...အား..ကောင်းတယ် သွန်းရယ်..စုပ်..စုပ်..အ..အား..အိုး...ဟိုး.."အချက်၂၀ခန့် စုပ်ပြီးချိန်တွင်ခေတ်သစ်မှာသွန်းဆက်ပါးစပ်ထဲလရည်များသွန်ချလိုက်တော့သည်။ "Sorry သွန်း ကိုယ် မထိန်းနိုင်လိုက်လို့ သွန်း စုပ်တာအရမ်းကောင်းတာပဲ".."ရပါတယ် ကိုရယ် သွန်းမျိုချလိုက်ပြီ"..ပေကျံသွားသောပါးစပ်ကိုသုတ်ကာသွန်းဆက်ကခေတ်သစ်ကိုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ခေတ်သစ်လည်းသွန်းရဲ့နှုတ်ခမ်းကိုစက္ကန့်၃၀လောက်စုပ်နမ်းလိုက်ပြီး"သွန်း..အဆင်ပြေရဲ့လားဟင်".."ပြေပါတယ် ကိုရယ်"..."ဒါဆိုကိုယ်တို့ နောက်နေ့ တွေလည်း sexy pose လေးတွေ ထပ်ရိုက်ရအောင်နော်..."။ "ကို့သဘောပါပဲကွယ်"..သွန်းဆက်ခေါင်းလေးငုံ့ကာပြောလိုက်သည်။ခေတ်သစ်လည်းသွန်းဆက်မျက်နှာလေးကိုဆွဲယူကာနှုတ်ခမ်းချင်းတေ့စုပ်ရင်းစိတ်ထဲကပြောလိုက်သည်။"ကိုယ် လိုးခဲ့ဘူးတဲ့ မော်ဒယ်လ်ထဲမှာသွန်းကအကောင်းဆုံးပါကွာ".....
Posted by bluegyi at 05:26
linn yone9December 2014 at 14:08
G ton 11 December 2014 at 08:59
story is pretty so very good.
Zaw Zaw Naing 28 May 2015 at 03:18
chanchan Nyein3September 2015 at 04:06
Ko Nyi 20087March 2016 at 02:20
killer point95May 2016 at 23:46
MYAN HAU JOHN 26 September 2018 at 01:39
too quick and aggressive to shove the big penis into virgin vagina without preliminary activities & it is hard to enter the anal ass of virgin.Like to read rapped stories.Looking fprward to your erevtile stories.
ကျောက်တံခါးမြို့နယ် တောကျွဲအင်းမြို့က ခင်မူယာတဲ့ ...